“Juventus waa koox weyn, lakiin Manchester United way ka duwan tahay” – Pogba – Gool FM
“Juventus waa koox weyn, lakiin Manchester United way ka duwan tahay” – Pogba
(Manchester) 03 Feb 2019. Khadka dhexe kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa xaqiijiyay in Red Devils ay ka duwan tahay dhamaan kooxaha kale ee caalamka oo ay qeyb ka tahay Juventus.
Isagoo dhinaca kale sheegay in macalinka ku meel gaarka ah ee Manchester United Ole Gunnar Solskjær uu si aad ah ugu dhow yahay dhamaan ciyaartoyda.
“Juventus waa koox weyn, lakiin Manchester United way ka duwan tahay”.
“Waxaan ka tagay Manchester United, sababtoo ah waxaan doonayay inaan helo fursad aan ku ciyaaro, waxaan dareemay inaan u baahanahay inaan ciyaaro, xiligaas Scholes iyo Carrick ayaa u ciyaarayay kooxda”.
“Sidaasi darteed waxaan u maleynayay inaan ubaahanahay inaan u dhaqaaqo meel kale ee aan ka heli karo fursad aan ku ciyaaro, kadib aan dib ugu soo laabto Manchester United maalinta ay noqoto, sida haatan dhacday”.
Intaas kadib Pogba ayaa wuxuu ka hadlay sida uu macalinka ku meel gaarka ah ee Manchester United Ole Gunnar Solskjær ugu dhow yahay ciyaartoyda wuxuuna yiri:
“Mar walba wuxuu ku dhow yahay ciyaartoyda, mar walbana wuu dhoola cadeeyaa, laakiin marka uu ku gudi jiro waqtiga shaqada, waxaad arkeysaa sida adag uu ugu mashquulasan yahay shaqadiisa, kadibna sidiisa hore ee caadiga ah ayuu dib ugu soo laabtaa”.
“Waa shaqsi leh qalbi aad u weyn, kaasoo aanan isbadalin marka laga reebo timahiisa”.
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Manchester City Vs Arsenal